ရှေးမြန်မာ..: ပုဂံ ဆေးရေးမင်စာ ရှိသော ဂူ၊ကျောင်း၊ဘုရား များ
ပုဂံ ဆေးရေးမင်စာ ရှိသော ဂူ၊ကျောင်း၊ဘုရား များ
၁။ ကုန်းတော်ကြီး ( မှတ်တမ်းစာ)
၂။ ကျဆင်းဘုရား ( ရှေးမွန်စာ )
၃။ ခေမာဝရ ဂူဘုရား ( မှတ်တမ်းစာ)
၄။ ချောက်ဘုရားလှ ( မှတ်တမ်းစာ)
၅။ ဂူအမှတ် ၂၀၄ ( မှတ်တမ်းစာ)
၆။ ဂူအမှတ် ၄၁၈ ( ရှေးမွန်စာ )
၇။ ဂူအမှတ် ၈၁၄ (မှတ်တမ်းစာ)
၈။ ဂူအမှတ် ၈၁၅ ( မှတ်တမ်းစာ)
၉။ ဂူအမှတ် ၈၄၀ ( မှတ်တမ်းစာ)
၁၀။ ဂူအမှတ် ၁၁၂၄ ( မှတ်တမ်းစာ)
၁၁။ ဂူအမှတ် ၁၁၂၇ ( မှတ်တမ်းစာ)
၁၂။ ဂူအမှတ် ၁၁၄၀( မှတ်တမ်းစာ)
၁၃။ ဂူအမှတ် ၁၁၄၁ ( မှတ်တမ်းစာ)
၁၄။ ဂူအမှတ် ၁၁၄၂ ( မှတ်တမ်းစာ)
၁၅။ ဂူအမှတ် ၁၁၄၃ ( မှတ်တမ်းစာ)
၁၆။ ဂူအမှတ် ၁၁၄၄ ( မှတ်တမ်းစာ)
၁၇။ ဂူအမှတ် ၁၁၉၂ ( မှတ်တမ်းစာ)
၁၈။ ဂူအမှတ် ၁၂၁၄ ( မှတ်တမ်းစာ)
၁၉။ ဂူအမှတ် ၁၃၀၇ ( မှတ်တမ်းစာ)
၂၀။ ဂရို့ဘုရား ( အုတ်တချပ်ဘုရား ) ( မှတ်တမ်းစာ)
၂၁။ စိမ်းညက် ညီအမ ( မှတ်တမ်းစာ)
၂၂။ ငါးမျက်နှာ ဘုရား( မှတ်တမ်းစာ)
၂၃။ စာသင်ဂူ ( မှတ်တမ်းစာ)
၂၄။ စာသင်ဂူမြောက်ဘက် ၄ ဖာလုံအကွာရှိ တိုက်ခံဘုရား( မှတ်တမ်းစာ)
၂၅။ စောလှဝိုင်းဘုရား အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ အရှေ့လှည့်ဂူ ( မှတ်တမ်းစာ)
၂၆။ စောလှဝိုင်းဘုရား အနောက်မြောက်ဘက်အနီး ဂူအမှတ် ၉၈၂ ( မှတ်တမ်းစာ)
၂၇။ ဆုတောင်းပြည့် ( မှတ်တမ်းစာ )
၂၈။ ထီးလိုမင်းလို ( မှတ်တမ်းစာ)
၂၉။ တောင်ဘီရွာ အနောက် မွန်ဂူ၏ ဗဟိုတိုင်၊ မြောက်ဘက်လိုဏ်ဂူ အရှေ့နံရံ ( ဇာတာ ၃ ခု ၊ မှတ်တမ်းစာ )
၃၀။ တောင်ဘီရွာ အနောက် မွန်ဂူမြောက်ဖက် ကပ်လျက်ရှိသော ဂူအမှတ် ၁၃၀၇ ဂန္ဓကုဍိတိုက်အဝင်ပေါက် တောင်ဘက်နံရံ ( ဇာတာ၊ မှတ်တမ်းစာ )
၃၁။ တောင်ဘီရွာ အနောက် ရှေးမွန်ဘုရား ( ရှေးမွန်စာ )
၃၂။ တိုက်ခံဘုရားမြောက်ဘက်အနီး ပြိုနေသောဘုရား ( မှတ်တမ်းစာ)
၃၃။ ထီးလိုမင်းလိုစေတီအနီးတဝိုက်ရှိ ရွှေလိပ်တူး ၊ ရွှေလိပ်ပြေး ( မှတ်တမ်းစာ)
၃၄။ ထီးလိုမင်းလိုအနောက်ဘက် ဂူအမှတ် ၁၁၂၃ ( မှတ်တမ်းစာ)
၃၅။ ဓမ္မရာဇိကဘုရား အရှေ့ ဂန္ဓကုဋိ မြောက်နံရံ ( တောင်ငူခေတ် ကဗျာ )
၃၆။ နွားများဂူ ( နွားပြဂူ ခေါ် နွားမျာ့သင်္ခရာ နှစ်ထပ်ဂူဘုရား ) ( မှတ်တမ်းစာ)
၃၇။ နွားပြဂူ အရှေ့ဘက် တဝဂူ ( မှတ်တမ်းစာ)
၃၈။ ပုထိုးသများ ဘုရား ( ရှေးမွန်စာ )
၃၉။ ပုဂံမြော်ဘုရား ( မှတ်တမ်းစာ)
၄၀။ ပုဂံအနောက် ဖွားစောရွာ သစ္စာဝတီ ၂ထပ်ဂူဘုရား ( မှတ်တမ်းစာ )
၄၁။ ပဲနံသာဂူ ဘုရား ( မှတ်တမ်းစာ)
၄၂။ ပဲနံသာဂူ ဘုရားအနီးရှိ အမည်မရှိဂူဘုရား ၂ဆူ ( မှတ်တမ်းစာ)
၄၃။ ဖြတ်စရွှေဂူ( မှတ်တမ်းစာ)
၄၄။ မင်းနန်သူရွာ ဘုရားသုံးဆူ အတွင်းနံရံ ( မင်းရေးဇာတာ ၃ခု ၊ မှတ်တမ်းစာ )
၄၅။ မြစည်းခုံဘုရားတောင်ဘက် ဥယဉ်ကြီးဘုရား ( ဂူ- ၃၃၉) ၏အာရုံခံအရှေ့နံရံ တောင်ဘက်ပိုင်း ( မှတ်တမ်းစာ )
၄၆။ မင်္ဂလာစေတီအနီး သဲဘုရား ( မှတ်တမ်းစာ)
၄၇။ မင်္ဂလာစေတီအနီး ငါးမျက်နှာဘုရား ( မှတ်တမ်းစာ)
၄၈။ မင်္ဂလာစေတီအနီး ဘွဲ့မရှိ ဘုရားကလေး ( မှတ်တမ်းစာ)
၄၉။ မင်္ဂလာစေတီအနီး မြောက်လှည့်ဂူ ( နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ ၊ မှတ်တမ်းစာ )
၅၀။ မင်္ဂလာစေတီအနီး အဂ္ဂတေ့ဘုရား ( မှတ်တမ်းစာ )
၅၁။ မင်္ဂလာစေတီအနီး အရှေ့လှည့်ဂူ ၆၆၀ ၊ ( မှတ်တမ်းစာ )
၅၂။ မင်္ဂလာစေတီအနီး မြောက်လှည့်ဂူ (မှတ်တမ်းစာ)
၅၃။ မီးငြမ်းကုန်း ( မှတ်တမ်းစာ)
၅၄။ မြင်းကပါရွာ မြောက်ဘက် ဂူပြောက်ငယ် ( မှတ်တမ်းစာ၊ တောင်ငူခေတ် ကဗျာ ၊ ဇာတာ )
၅၅။ မြင်းကပါဂူပြောက်ငယ် အရှေ့အာရုံခံ တောင်နံရံ ( ရတု ပိုဒ်စုံ ၂ ပုဒ် )
၅၆။ မြင်းကပါ ဂူပြောက်ကြီး ( ရှေးမွန်စာ)
၅၇။ မြင်းပြဂူ ( ရှေးမွန်စာ ၊ ၅၅၀ ဇာတ်နိပါတ်တော်စာ)
၅၈။ မိုးကြိုးပစ်ဘုရား ( မှတ်တမ်းစာ)
၅၉။ မိုးမှဲမှောင် ( မှတ်တမ်းစာ)
၆၀။ မြသိန်းတန် ( နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ ၊ မှတ်တမ်းစာ )
၆၁။ မာရ်အောင်ဘုရား ( မှတ်တမ်းစာ)
၆၂။ ရွာဟောင်းကြီးခေါ် လောကမှန်ကင်းနှစ်ထပ်ဂူ ၈၁၁ ( မှတ်တမ်အစာ)
၆၃။ ရှင်မယ်ဇူ (သဖြူလေး) ဘုရား ( မှတ်တမ်းစာ)
၆၄။ ရွှေကြံဖပ်( မှတ်တမ်းစာ)
၆၅။ ရွှေဆံတော်ဘုရား အနောက်ဖက် ၊ လောကဦးသျှောင် နှစ်ထပ်ဂူဘုရား (ဂူ- ၇၈၀) အရှေ့ဖက် အာရုံခံ မြောက်နံရံ ( ကဗျာ )
၆၆။ ရွှေလက်လှ ( နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ ၊ မှတ်တမ်းစာ )
၆၆။ ရွှေဆံတော်ဘုရားအနီး မဟာဂူကြီး ( မှတ်တမ်းစာ)
၆၇။ ရွှေဆံတော်ဘုရားအနီး ဂူကြီးဘုရား ( မှတ်တမ်းစာ)
၆၈။ ရွှေဆံတော်ဘုရားအနီး ဂူအမှတ် ၇၇၃( မှတ်တမ်းစာ)
၆၉။ ရွှေဆံတော်ဘုရားတောင်းဖက်ရှိ ဂူငယ် ( အလှူရှင်အမည် နှင့် မှတ်တမ်းစာ )
၇၀။ ရွှေဆံတော်မြောက်ဘက်ရှိ ဂူကလေးဘုရား( မှတ်တမ်းစာ)
၇၁။ ရွှေဘုံသာဘုရား ဂူအမှတ် ၂၀၂ ( မှတ်တမ်းစာ)
၇၂။ ရွှေလက်လှ ဂူအမှတ် ၁၂၆၈ (မှတ်တမ်းစာ )
၇၃။ လောကထိပ်ပန် ( မှတ်တမ်းစာ)
၇၄။ ဝက်ကြီးအင်း တန်ဆောင်း မိဘုရားကျောင်း ( မှတ်တမ်းစာ)
၇၅။ ဝက်ကြီးအင်း လေးမျက်နှာဂူ ( မှတ်တမ်းစာ)
၇၆။ ဝက်ကြီးအင်း ဂူပြောက်ငယ် ( မှတ်တမ်းစာ)
၇၇။ သကျမုနိ ( မှတ်တမ်းစာ)
၇၈။ သဗ္ဗညုဘုရား ( မှတ်တမ်းစာ)
၇၉။ သမ္ဘူလ ( သုံးလူလှ ) (ဗုဒ္ဓဝင် ပါဠိဂါထာ )
၈၀။ သိမ္မစည်း ဘုရား ( မှတ်တမ်းစာ)
၈၁။ သျှင်ပင်သက်တော်ရှည် ( မှတ်တမ်းစာ)
၈၂။ အနောက်ဖွားစောရွာ သစ္စာဝတီ ဂူဘုရားအရှေ့တောင် မင်းမရဲဂူငယ် ( မှတ်တမ်းစာ )
၈၃။ အလိုပြည့်ဘုရာ ( မွန် မှတ်တမ်းစာ )
၈၄။ အလိုပြည့်ဂူ အနောက်ဘက်ရှိ ဂူအမှတ် ၂၃၅ ( မှတ်တမ်းစာ)
၈၅။ အလိုပြည့်ဂူ အရှေ့မြောက် ကိုက် ၅၀ ခန့်အကွာရှိ ဂူအမှတ် ၁၃၀ ( မှတ်တမ်းစာ)
၈၆။ အာနန္ဒာ အုတ်ကျောင်း ( မှတ်တမ်းစာ )
မင်စာအမျိုးအစား ၂ မျိုးရှိပါတယ်။
၁။ မူလရေး မင်စာ
မူလရေးမင်စာတို့တွင် ဗုဒ္ဓဝံသဖြစ်သော နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားများ ၊ ငါးရာငါးဆယ် ဇာတ်တော်များ ၊ နိပါတ်တော်များနှင့် တခါတရံမြတ်စွာဘုရား၏ ဖြစ်တော်စဉ်များ၊ ဟောကြားခဲ့သော သုတ်တော်များ၊ ဝိနည်းများ ၊ အိန္ဒိယပြည်တွင် ဗုဒ္ဓအယူဝါဒနှင့် ဆက်စပ်နေသော ရာဇဝင်ကြောင်းများ ၊ မဟာဝင် စသည်တို့ပါဝင်သည်။ ယင်းမူလထိုး မင်စာများကို မွန်ဘာသာဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြန်မာဘာသာဖြင့်လည်းကောင်း အဆောက်ဦးတည်စကပင် ရေးထားခဲ့ကြသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။
နောက်ရေးမင်စာများတွင် ၊ ထပ်မံ ပြုပြင်မွမ်းမံသော အကြောင်းအရာများ ၊ ဆေးမီးတိုများ ၊ ဂါထာများနှင့် ဇာတာများ ပါဝင်ပါသည်။ မြန်မာဘာသာတို့ဖြင့် ရေးထား၍ ၊ စကားပြေနှင့်လည်းတွေ့ရ၏။ လင်္ကာနှင့်လည်းတွေ့ရ၏။ ယင်းမင်စာများ အဆောက်ဦးများ တည်ထားပြီးသည့်နောက် ကာလများအတွင်းက ရေးထားခဲ့သည့် နောက်ရေးမင်စာဖြစ်ကြောင်း ခွဲခြားဖော်ပြအပ်ပါသည်။
ဒီစာရင်းဟာ လုစ် (G.H Luce )၊ ဗိုလ်မှူးဘရှင် ၊ ဦးဖေမောင်တင် တို့ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ခဲ့တဲ့ ၁၉၆၄ ခုနှစ်ထုတ် ပုဂံမင်စာစု သုတေသနလုပ်ငန်း မှတ်တမ်းစဉ် (၁)ကို အခြေခံပြီး စာရင်းလုပ်ထားတာပါ။ ဒါကြောင့် ၁၉၆၄ နောက်ပိုင်းကာလ အခြေနေကို မသိရသေးပါ။ ပုဂံဘုရားတွေအများကြီးထဲမှာ မှ အရေတွက် ၉၀ လောက်သာရှိတဲ့ စာရင်းသာရတဲ့အတွက် စုံလင်လှပြီလို့ မဆိုနိုင်ပါ။ တချို့ ဂူ ၊ကျောင်း ၊ဘုရား ၊ အဆောက်ဦးသော်လည်းကောင်း ၊ ရေးထားတဲ့ မှင်စာသော်လည်းကောင်း ပျက်စီးပြီးဖြစ်နေလောက်ပါပြီ။ အခုလက်ရှိအချိန်မှာ ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲဆိုတာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရှေးဟောင်းသုတေသန ဌာန ကဆက်ပြီးလုပ်သင့်တယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီစာရင်းဟာ ပုဂံသွားပြီး မှင်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက်အသုံးဝင်နိုင်ကောင်းပါရဲ့။
Posted by ရှေးမြန်မာ at 12/20/2010
ÁLVARO BÓMEZ CASTRO December 20, 2010
Hello: Congratulations on your blog;. My name is Alvaro Gómez Castro and I live in Santa Marta, Colombia. I haveablog journal on philosophy, literature and technological applications. I am an educator and I am determined to find strategies to bring education to all corners. I am currently preparingalist of authors and literary works by countries and found very little about their country. If you can help, I appreciate it. You can visit my site and find out my task.
ရှေးမြန်မာ December 21, 2010
muy gracious for your links and found it wasagreat task that you are doing, I'm willing to share information about our country but I'm afraid that my blog is not about philosophy nor technological application,there isaconnection to literature but more to culture,historical and archeological works and info,anyway
ShwunMi- December 23, 2010
Thanks for sharing culture,historical and archeological works and info.